Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Nathan Ake Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye onye aha ya maara aha ya “Anyị Mmadụ”.
Nwa akwukwo anyi bu Nathan Ake Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge.
Nyocha nke Ex-Chelsea na Man City kpakpando gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Sergino Dest Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ee, onye ọ bụla maara banyere Dastalo Rastafarian ya. Naanị mmadụ ole na ole na-ele Nathan Ake's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Nathan Ake Nwatakiri Akuko - Nmalite na Ezin’ulo:
Malite, aha ya bụ Nathan Benjamin Ake. A mụrụ ya na 18th ụbọchị nke February 1995 na nne Dutch ya, Ineke Telder na nna ya yiri anya, Moise Ake na Hague, Netherlands.
Frenkie de Jong Ụmụaka Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Nathan Ake bụ nwa nwoke nke mba ọzọ si na Ivory Coast kwaga Netherlands ịchọ ma hụ ọdịnihu nke ụmụaka ya amụrụ.
Nna ya, Moise Ake bụ teetotal (onye họọrọ ị abstụbiga mmanya ókè). A na-eto Netan Ake Family maka idebe bọọlụ na obodo ha nke Voorburg dị nso na Hague, Netherlands.
Memphis Depay Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Nathan toro na Hague na nwanne ya nwoke nke okenye, Cedric bụ onye na-arụ ọrụ na Chelsea FC Mega Store. Dika nwatakiri, a maara Ake na o bu nwatakiri ihere.
Ake tolitere n'okpuru nduzi nke nne na nna ya bụ ndị tinyere aka na njikwa egwuregwu ntorobịa na Hague, Netherlands.
Nna Nathan Ake bụ onye njikwa ụlọ akwụkwọ ntorobịa maka VV Wilhelmus agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ mgbe mama ya na-enyere nri maka otu agụmakwụkwọ.
Myron Boadu Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Nathan Ake Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
Dika onye nkuzi nke ulo akwukwo, Nathan Ake papa Moise Ake weputara uzo maka nwa ya nwoke itinye aka na football n'oge o bu nwata.
Inwe nne nke na-esi nri maka ụmụaka ịgba ọsọ ụmụaka nyere aka na Nathan itinye aka na football.
Clublọ ọgbakọ mbụ ya, Wilhelmus nke kachasị ochie na mpaghara obodo ya bụ ndị ụkọchukwu Katọlik John van Houten na Wilhelmus van Stee guzobere.
Quincy na-ekwe nkwa Akụkọ Childmụaka Gụnyere Eziokwu Ha Na-adịghị Eke Ndụ
N'oge ahụ, Nathan Ake nke dị n'okpuru ebe a bụ otu ma ọ bụ afọ abụọ tọrọ karịa ndị ibe ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka bụ onye kasị mma. Dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ otu n'ime ndị kachasị nta na squad Wilhelmus.
Ọ bụ oge nwa ọ bụla nwere mmasị na cub. Na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Wilhelmus, ịtọgbọrọ chakoo bịara obere ụmụaka mgbe enwere bọọlụ n’ụkwụ ha.
Virgil van Dijk Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Maka Ake, o doro anya na ọ nwere ọdịnihu dị mma. Malite na ọrụ ya, Ake mụtara ahia nke ịkpọ aka ekpe ma ọ bụ aka ekpe-azụ. Onye nkuzi nwanyi ya nke sere n’elu bụ onye kuziri ya etu esi azọchitere ya.
Nathan Ake Bio - Okporo tozọ Ado Den Haag:
Mgbe ọ na-egwuri egwu na klọb nke obodo ya bụ Wilhelmus, ndị ntorobịa ntorobịa sitere na Ado Den Haag, nnukwu ụlọ ịgba egwu na Ajax na Feyenoord hụrụ Nathan Ake wee kpụga ya na ikpe.
Robin van Persie Child Story Plus Na-emeghị Ihe Nkọwa Na-adịghị Eke
Ake n'egbughị oge ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha mma. N'agbanyeghị nke ahụ, naanị otu nsogbu ya bụ eziokwu na ọ na-eme ihere karịa igwefoto dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ka ọ na-etolite na Ado Den Haag, Nathan Ake kwere nkwa ụzọ na-aga ngwa ngwa n'ime otu egwuregwu ọ bụrụ na ọ hapụghị ha.
Ọ dị mkpa iji mara nke ahụ Tim Krul, Daryl Janmaat sikwa na Den Haag Academy club pụta.
Joshua Zirkzee Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
N'agbanyeghị na e kwere ya nkwa itinye ngwa ngwa, Ake mechuru klọb ahụ site n'ime ka ndị mụrụ ya mee ka nyefe na Feyenoord mgbe ọ dị afọ 11 na mgbe afọ 5 nọrọ.
Nathan Ake Biography - tozọ A Maara Aha:
Na Feyenoord, Nathan Ake nwere obi ụtọ afọ 5 ọzọ (afọ 12 ruo 16) ebe o nwere meteoric ịrị elu na-esote afọ na klọb, oge nke fọrọ nke nta akara ntorobịa ya gụsịrị akwụkwọ.
Perr Schuurs Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mgbe ọ dị afọ 16, Ake duuru ndị otu ya iji merie asọmpi ntorobịa Junior.
N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ọ dị afọ 16, e nwere nnukwu mgbagwoju anya gbasara ịnọ ya na osisi. Nke a bịara dị ka European clubs tinyere Chelsea FC bịara kpọọ.
Ọzọkwa, onye nọ n'afọ iri na ụma mechara nye ndị otu ya ihe ijuanya.
N'oge Feyenoord chọrọ ịnabata ya na ndị otu ha, Ake mere mkpebi ya site na iji obi ike gwa onye njikwa Dutch akụkọ Leo Beenhakker, mgbe ahụ onye isi teknụzụ Feyenoord, na ọ na-ahapụ ọgbakọ.
Na mkpebi ya, Netan gosipụtara otu oge site n'ikwu;
Lionel Messi nwa akụkọ akụkọ ihe omuma
'Ana m eto eto, nke mere na o siri ike ikwu onye dị otú ahụ,'
ka Ake kwuru.
'Ma ị ghaghị ime mkpebi, ị ga-esiwanye ike ma too ngwa ngwa.'
Ake mgbe ọ dị afọ 16 gara naanị London iji sonyere usoro ntorobịa Chelsea.
Na Chelsea, Nathan Ake chere nsogbu ndị ọhụrụ ihu na ọrụ ya, mana ọ nweghị nke buru ibu ka ha si na Netherlands gaa London mgbe ọ dị afọ 16. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Kaylee Ramman Nathan Ake Storyhụnanya Akụkọ:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'azụ Ake na-aga nke ọma, enwere nnukwu enyi nwanyị ma ọ bụ enyi nwanyị dị ka a hụrụ na Kaylee Ramman dị n'okpuru ebe a.
Nathan onye malitere mmekọrịta ya na egwuregwu ya na obi nwata ahụwo mmekọrịta ahụ site na ọnọdụ kacha mma na ezi ịhụnanya.
Dị ka n'oge ederede, Kaylee site n'enyemaka nke enyi nwoke nwoke na-aga ugbu a na-arụ ahịa azụmahịa nke akpọrọ Medal Ọnọdụ.
Ewezuga ire ọla edo, Kaylee bụkwa onye na - ede blọgụ na - eme njem nke nwere ebe nrụọrụ weebụ nke ya ma nwee mmasị ide banyere ihe ndị mere ya. Ahụ ya mara mma na akụkụ ya dị ebube na-enweghị mgbagha na-adọrọ uche ya.
Ọ bụ naanị oge tupu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ga-amalite na-eti mkpu maka Nathan Ake na Kaylee Ramman.
Nathan Ake Ndụ nke Onwe:
A mụrụ Nathan Ake bụ onye ihere na onye dị jụụ mana ọ nwere ike ịdị ike ma dị ike. Ọ bụ onye na-eche echiche miri emi, onye nwere ọgụgụ isi nke ukwuu na-enwe mmasị inyere ndị ọzọ aka.
Ake nwere ike ịhụ ihe na-enweghị ajọ mbunobi, n'akụkụ niile, nke mere ya nsogbu nsogbu. N'ebe ọ bụla ọrụ ya na-eduga ya, Nathan maara otú e si eme mgbanwe maka ike gbara ya gburugburu.
Harry Kane Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Eziokwu
N'oge ụfọdụ, ọ hụrụ n'anya iwepụta oge ya naanị ya wee wepu ihe niile belụsọ Kaylee Ramman enyi ya nwanyị.
Emere nke a na ndị ọzọ iji weghachite ike ya ma mee ka ndụ ịhụnanya ya gbanwee. Nye Nathan Ake, ụwa bụ eziokwu, ebe jupụtara na ohere.
Nathan Ake Biography - Ihe Ntuziaka Ndị Na-eto Eto nke Chelsea:
Ị maara? Chelsea FC akwado Player nwere otu WhatsApp raara onwe ha nye nke ha jiri kesaa ihe omuma ha. Nathan Ake nke dị n'okpuru ebe a na-arụsi ọrụ ike na otu.
O sonyeere mgbe mgbazinye ego ya na Reading bidoro. Nke a gara n'ihu maka Watford na AFC Bournemouth.
Ọ bụ ezie na ndị egwuregwu Chelsea FC na-ewe iwe na-ahọrọ ihichapụ onwe ha, Nathan nọ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ kpebiri ịla n'azụ. Ọ na-arụsi ọrụ ike na otu ahụ mgbe ọ bụla ọzụzụ ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Nathan anyị. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Denzel Dumfries Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ryan Gravenberch Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Steven Bergwijn Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Donyell Malen Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Klaas-Jan Huntelaar Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
2 afọ gara aga
Zijn na-enyere gị aka ịbanye na nke a
Ruben Dias Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Patrick Bamford Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ